I-China Iphise Tattoo yokuThengiswa kwaMandla okuThengisa kunye neFektri MOLONG
Iimowudi ezimbini zoLawulo lwaMandla oMbane oDijithali oomatshini beTattoo oMbane oSebenzayo oBomvu kuKhakhayi lweTattoo
1. Ukunikezelwa kwamandla kunamaqhosha exesha, cofa ukuseta ukuqala nokumisa, cofa ixesha elide imizuzwana emithathu ukucoca zero
2. Ngokudibanisa kunye nokususa amaqhosha, umshicileli omde unokuqhubeka ukongeza nokukhupha umbane.
3. Yiba nexesha elide kunye nejog ezimbini zokutshintsha.
4. Amaqhosha amane anokucwangciswa ukugcina umsebenzi we-odi yombane wesine.
5. Uguquko lwendlela ezimbini
6. Umsebenzi wenkumbulo
7. Umsebenzi wexesha
UKUBONELELWA NGE-MOLONG TATTOO ngumvelisi wezixhobo zomvambo oqeqeshiweyo obe kule ndawo iminyaka emininzi. Sinikezela KUPHELA iimveliso ezikumgangatho ophezulu ngamaxabiso aphantsi kunye nokubonelela ngokugqwesileyo emva kwenkonzo yokuthengisa. Sinikezela ngokukhetha okukhulu kweekhatriji zeetattoo, iityhubhu ezilahlwayo zetattoo, iingcebiso kumvambo, ukubamba umvambo, iinaliti zetattoo, oomatshini bokubhala, iikiti zetattoo, izixhobo zombane, ukugqobhoza kunye nezinto zokufaka umvambo. Sizimisele ukwenza iimveliso ezikumgangatho ophezulu kwaye sinike ukuqinisekiswa komgangatho. Asiqhubeki siphuhlisa iindlela ezintsha.
1. Ingayintoni loo nto yokupakisha?
Ukupakisha uphawu lwethu, ukupakisha okungathath'icala, ukupakisha kwe-OEM (Ukuba kuceliwe ubuninzi obuninzi, banokubeka ilogo yabo kwiphakeji, kuthethathethwane)
2. Unjani umgangatho?
Siqinisekisa imveliso abaza kuyifumana iphelele, icocekile, isebenza kakuhle.
Umhloli woMzi-mveliso uya kuqinisekisa ukuba iipakeji zikwimeko entle ngaphambi kokuthunyelwa. Ukongeza, kuyo nayiphi na ingxaki unokuqhagamshelana neMOLONG emva kokuthengisa, unokufumana impendulo kunye nesisombululo.
3. Sinexabiso elingakanani?
Ixabiso Factory. Singabakhiqizi, sinokunikela ngamaxabiso okhuphiswano. Ingakumbi kubathengisi, isaphulelo esikhethekileyo kubo ukuze babancede bandise imarike yabo ngokukhawuleza.
4. Ndingazifumana njani iisampulu?
Iyaxoxwa. Ngokwesiqhelo asiboneleli ngeesampulu zasimahla. Kwiimeko ezimbalwa abathengi kufuneka bahlawule ukuthunyelwa, kwaye sithumela iisampulu zokubamba, iinaliti kunye nezinye izinto. Kubathengi abanokubakho, sinikezela ngezaphulelo ezithile.
5. Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuthunyelwa?
Ukuthumela nge-Express njenge-DHL, i-UPS, i-Fedex, i-TNT, i-EMS njl., Zihlala ziintsuku ezi-3 ukuya kwezi-10,
Ukuthumela ngenqanawa, kuthatha phakathi kweentsuku ezili-15 ukuya kwezingama-45.
Kuxhomekeke kwizizathu zobungakanani be-odolo, iarhente, umgama, kunye nenkqubo yokugunyazisa amasiko, njl.
6. Zeziphi iindlela zokuhlawula?
T / T (ukudluliselwa kwebhanki), i-Western Union, i-Paypal, i-Alibaba yokuqinisekisa intlawulo, i-Alipay Njl
Egqithileyo Umgangatho ophezulu weepateni ezibaziweyo zeTattoo Power ezingatyibilikisiyo kuMbane oManzi oMbane weTattoo
Okulandelayo: MO ukutshaja ngaphandle kweTatoo umbane
Ibhetri Inikwe amandla iTattoo Gun
Umatshini weTattoo kaMatshini weBhetri
Ukubonelelwa kwamandla ngeBattery Tattoo
Ukubonelelwa kwakhona kwamandla eTattoo
Umatshini woMatshini weTattoo
Ukubonelelwa kwamandla ngeTattoo Power Foot
UkuBonelela ngoMbane ngeTattoo
Ukubonelelwa ngombane ngomatshini weTattoo
Ukunikezelwa kwamandla ngaphandle kweTattoo
I-BMX TPN033 Ukubonelela ngoMbane weTattoo
I-TP-7 THUNDERLORD yokuhambisa umbane
U-HELLO II umbane ongenazingcingo weTattoo
I-Aurora 2 Tattoo yokubonelela ngombane
Molo III Tattoo Ukunikezelwa kwamandla eBhetri
MO ukutshaja ngaphandle kweTatoo umbane